Trigger Sprayer, Foam Sprayer Gun, Foam Pump Sprayer -Yongxiang
Iimveliso zenkampani yethu zisetyenziswa kakhulu kwiinkampani ezinkulu zokuthambisa kunye namashishini amayeza asekhaya.
Sihlala sikholelwa kumandla okwenza into enye ngentliziyo yethu, vumela iYongxiang ivelise Ibangcono.
I-Yongxiang ayithengisi kuphela iiprodycts, kodwa kwakhona sihlawule ingqalelo engakumbi kwi-customer'use experience.We sizama ukwenza ii-cutomers ziphuhlise ngentsebenziswano eyonwabileyo.
Custom 28/400 28/410 28/415 Plastic PP Material...
Vula / Vala uMbhobho Esi Sitshizi se-Trigger siza nesiketi esinembambo ukuze sijijwe lula ngezandla ezimtyibilizi kunye nokufikelela ngokulula kwiziqulatho ezingaphakathi ebhotileni. Ukongeza, esi sitshizi sesitshizi seplastiki esinembambo sifaka i-On/Off nozzle kwincam yesitshizi. Uyakwazi ukujija umlomo wokuVula/uValwe ngasekunene okanye ngasekunene ukuvala indlela yokuphuma kwisitshizi. Xa ikwindawo evaliweyo ithintela isitshizi kuko nakuphi na ukukhutshelwa ngengozi kwaye igcina isiqhushumbisi sikwindawo engqongqo...
IPumpu yesiBonelelo seSepha yeSiko sePlastiki yeSiko...
Inkcazelo Ezi mpompo zokuthambisa zenzelwe iibhotile zempompo yokuthambisa okanye iidispenser kwaye ziza ngemibala eyahlukeneyo. Zifanelekile kwizinto ezibonakalayo, ezifana nokuthambisa, iisepha zolwelo, kunye neshampu, kunye namayeza, izithambiso, kunye nezinye iimveliso zempilo nezobuhle. Igqibelele kwizixhobo ze-viscous 24/410 iimpompo zisenokungangeni zonke iintamo. Ukhupha i-2mL nge-stroke I-Plunger ivalela ukuthunyelwa nokugcinwa kwayo Iimpompo ze-polypropylene lotion zine-slot yokutshixa ngaphakathi kwe-cap kwaye zize zithunyelwe...
18/410 20/410 24/410 360 Degree Isitshizi Nozzle Pe...
Inzuzo yethu: I-1.Sinezixhobo ezibalaseleyo zokuvula i-mold, iqela lobugcisa elicebileyo, lenze isethi yophuhliso lokubumba, i-injection yokubumba, indibano engenathuli, ukusebenza ngokuzenzekelayo njengenye yenkqubo yokuvelisa. 2.Ngangaphezulu kwama-80 oomatshini bokubumba inaliti, umthamo wemihla ngemihla wemveliso yesitshizi senkungu elungileyo ufikelela kwisigidi esinye. 3.I-LOGO eyenziwe ngokwezifiso inokwamkelwa, isikhunta sinokuvulwa ngokweemfuno zabathengi. 4.Izatifikethi: SGS/ISO9001/FDA I-polypropylene (PP) isitshizi senkungu elungileyo f...
I-Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd lishishini lobuchwephesha elibandakanyeka ekuveliseni izitshizi zeplastiki ezahlukeneyo, iiplastiki, iimveliso ze-electroplating kunye nemveliso yezityalo, eyasekwa ngo-1992. Umanduleli yiYuyao City Jin Chun Plastics Co., Ltd. kushishino lweplastiki iminyaka emininzi. Inkampani yethu ikufuphi neHangzhou Bay Bridge eyaziwayo kunye neHangzhou Ningbo Expressway, ngoko ke ukuthutha kulula kakhulu. Inkampani yethu inesebe leR&D..